Faịlimọn, Ndị Ohu n’Oge Rom Na-achị Ụwa, na Ihe Ndị Finishia Ji Esiji Ákwà | Ị̀ Maara?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Maltese Maya Mongolian Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Olee otú e si emeso ndị ohu mgbe ndị Rom na-achị ụwa?
Ígwè ndị Rom na-anyawa ndị ohu n’olu
E nwere ọtụtụ ndị ghọrọ ndị ohu mgbe ndị Rom na-achị ụwa. E jidere ụfọdụ n’ime ha mgbe e meriri obodo ha n’agha, a tọkwaara ụfọdụ atọrọ. Ọ na-abụ e jide ha ma ọ bụ tọrọ ha, e ree ha. Ha agaghịkwa ahụ obodo ha ma ọ bụ ezinụlọ ha anya ọzọ.
A na-akpọga ọtụtụ ndị ohu n’ebe a na-egwupụta akụ̀ ndị dị n’ime ala. Ụfọdụ n’ime ha na-arụgide ọrụ n’ebe ahụ nwụọ. Ma, e nwere ndị nke a na-akpọga n’ubi ma ọ bụ n’ụlọ ndị mmadụ ka ha rụwa ọrụ. Ihe na-akatụrụ hanwa mfe karịa ndị nke a na-akpọga n’ebe a na-egwupụta akụ̀ ndị dị n’ime ala. A na-anyawa ndị ohu ígwè n’olu, a na-edekwa ihe n’ígwè ahụ. Ihe a na-ede na ya bụ na ọ bụrụ na ohu ahụ agbafuo, a ga-enye onye ọ bụla kpọlatara ya onyinye. Ọ bụrụ na ohu agbalịa ọtụtụ ugboro ka ọ gbafuo, a na-eji ígwè ọkụ nwere mkpụrụ akwụkwọ bụ́ F daa ya n’egedege ihu. Mkpụrụ akwụkwọ a nọchiri anya okwu Latịn bụ́ fugitivus. Ihe ọ pụtara bụ onye gbara ọsọ.
Akwụkwọ Baịbụl bụ́ Faịlimọn kwuru na Pọl onyeozi zighachiiri Faịlimọn ohu ya a na-akpọ Onesịmọs. Ọ bụ eziokwu na Faịlimọn kwesịrị ịta Onesịmọs ezigbo ahụhụ maka na ọ gbapụrụ n’ụlọ ya, Pọl gwara Faịlimọn ka o “jiri obiọma nabata” Onesịmọs ebe ọ bụ na ha aghọọla Ndị Kraịst hụrụ ibe ha n’anya.—Faịlimọn 10, 11, 15-18.
Gịnị ka e ji mara mba Finishia n’oge ochie?
Ihe e ji mara mba Finishia n’oge ochie bụ ihe e ji esiji ákwà ka ọ chawa pọpụl pọpụl. Ihe a na-akpọzi ebe ahụ Finishia dị bụ Lebanọn. Taya bụ obodo a ma ama na Finishia, e jikwa aha ya mara ihe ahụ e ji esiji ákwà. Eze Izrel bụ́ Sọlọmọn ji “ajị anụ e sijiri odo odo” ma ọ bụ pọpụl pọpụl chọọ ụlọ Chineke mma. Ọ bụ otu nwoke si Taya mepụtara ajị anụ ahụ.—2 Ihe E Mere 2:13, 14.
Ihe ndị Taya ji esiji ákwà ka ọ chawa pọpụl pọpụl kacha oké ọnụ n’oge ahụ n’ihi na ọrụ a na-arụ tupu e nweta ya adịghị mfe. Ọrụ mbụ a na-arụ bụ ịga n’osimiri tụtụọ ihe a yiri eju e sere n’aka ekpe. A na-atụtụ ya ebe o buru ibu n’ihi na e nwere ike iji ihe ruru puku iri na abụọ sijie naanị otu ákwà. A tụtụchaa ha, a na-ewepụta ha ná mkpokoro ha ka e nweta ihe e ji esiji ákwà dị n’ime ha. E wepụtachaa ha, a na-etinye ha nnu ma dowe ha ebe ikuku ga na-eku ha nakwa ebe anwụ ga na-acha ha ruo abalị atọ. A na-etinyezi ha n’ite, kunye mmiri si n’osimiri n’ite ahụ ma sinye ya n’ọkụ na-anaghị enwusi ike ruo abalị ole na ole.
Ndị Finishia nọ na-emepụta ihe e ji esiji ákwà ka ọ chawa pọpụl pọpụl ma na-ere ya ruo ọtụtụ narị afọ. Ihe mere ha ji nwee ike ime ya bụ na mba Finishia chịrị ọtụtụ mba ndị ọzọ, azụmahịa dokwara ha anya. Ihe a hụrụ n’ebe ndị dị nso n’Oké Osimiri Mediterenian ruo n’ebe ọwụwa anyanwụ obodo Kadiz nke dị na Spen gosiri na ha mepụtara ihe e ji esiji ákwà n’oge ochie.
Ị̀ Maara?—Eprel 2014